घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू जीन-फिलिप मटेटा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
जीन-फिलिप मटेटा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू। क्रेडिट: Bundesliga र MiroP10
अन्तिम अपडेट गरिएको 1 सक्छ, 2020
हामी जीन-फिलिप मटेटा बचपन कहानी, जीवनी तथ्या ,्क, प्रारम्भिक जीवन, प्रेम (प्रेमिका / पत्नी) तथ्यहरू, परिवार, आमा बुबा, व्यक्तिगत जीवन, र जीवन शैली को पूर्ण कभरेज प्रस्तुत गर्दछौं। यो सबै उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण विश्लेषण हो जुन उनको युवा अवस्थादेखि सुरु भयो जब उनी फेमस भयो।
जीन-फिलिप मतेटाको प्रारम्भिक जीवन र उदय। - लियोनमैग, ट्रान्सफरमार्केट र इन्स्टाग्राम
हो, तपाईं र मलाई थाहा छ म्याटेटा ब्लकमा एक नयाँ बच्चा हो, जसको फुटबल प्रोफाइल कम कागजात छ। अझ, तथ्य यो हो कि ऊ युरोपको सबैभन्दा रमाईलो युवा स्ट्राइकर हो, जसले आफ्नो विजार्ड्रीमा गोलहरू थपेका छ।
यद्यपि, केवल एक हात थोरै फुटबल प्रशंसकहरूले पढ्न विचार गरे जीन फिलिप मतेटाको जीवनीजुन हामीले तयार गरेका छौं, र यो एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप ado बिना, गरौं उनको युवा कहानी संग शुरू गरौं।
जीन-फिलिप मटेटा बचपन कहानी:
जीन-फिलिप मतेटाको जन्म जून १ 28 1997 XNUMX को २ on औं दिनमा क्लाराम्टमा भएको थियो जुन फ्रान्सको पेरिसको दक्षिणपश्चिम उपनगरमा अवस्थित छ। यो फुटबलर आफ्ना बाबुआमाको पहिलो छोराको रूपमा र परिवारमा दुवै पुरुष र महिला बच्चा जन्मेको थियो।
फ्रान्स-फुटबलले यसलाई राख्ने बित्तिकै, शान्त बच्चाको रूपमा हुर्कियो जसले स्माइली अनुहार राख्थ्यो। तपाईंलाई थाँहा थियो?…। जीन-फिलिप मटेटा एक धनी परिवारमा जन्मिन सक्थ्यो यदि सबै कुरा पहिले उसको बुवासँग राम्रोसँग भएको थियो। हामी तपाईंलाई त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको बारेमा बताउनेछौं जुन उनका पिताले उनी जन्मेको बर्षौं बर्ष अघि आयो।
पारिवारिक उत्पत्ति र जीन-फिलिप मटेटाका अभिभावक (उनका बुवा) का दुःख:
फ्रान्सेली स्टारमा क Cong्गो परिवारको वंश छ, जसलाई उसको बुवा पत्ता लगाउन सकिन्छ र सम्भवतः आफ्नो आमा पनि। जीन- फिलिप मेटेटाका बुबा कुनै समय फुटबलर थिए जसले क Cong्गोमा व्यावसायिक खेले। २२ बर्षको उमेरमा, उसको फुटबल क्यारियरले उनलाई आफ्नो परिवार बेल्जियमको लागि छोड्यो।
अब यहाँ दुखद भाग आउँछ। युरोपमा अवस्थाले एउटा दुःखद मोड लियो किनकि अशुभ बुबाले आफूलाई जांघको चोटले लड्दै गरेको देख्नु भयो, जसले अचानक उनको कान्छो उमेरमा उनको क्यारियरको अन्त्य भयो।
जीन - फिलिप Mateta परिवार पृष्ठभूमि उनको जन्म को समय मा:
बढ्दो फ्रान्सेली स्ट्राइकर तल्लो-मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिबाटको हो। प्रारम्भमा, दुबै जीन-फिलिप मटेटाका आमा बुबा दुबैले आफ्नो परिवारलाई चालु राख्न मासुको काम गरे। उनका बुबा, जसले २२ वर्षको उमेरमा आफ्नो क्यारियर समाप्त गर्नुभयो, क्लाराटमा सुरक्षा जागिर लिनुभयो।
जीन-फिलिप मटेटाका अभिभावकहरू बसोबास गर्ने फ्रान्सेली कम्युन (क्लेमार्ट) पेरिस (31१ मिनेटको ड्राईभ) को नजिकको कारण त्यहाँ बसोबास गर्न चाहने आप्रवासीहरूका लागि राम्रो ठाउँ हो भनेर चिनिन्छ।
जीन-फिलिप मतेटा माता-पिता क्लारामार्टमा बसे जुन पेरिस- गुगल नक्सामा -१ मिनेट ड्राइभमा थियो
मटेटा जस्तै, धेरै जसो अफ्रिकी परिवारका जराका फुटबलरहरू Dan-Axel Zagadou, एलन सेन्ट-मैक्सिम, सेबास्टियन हलर सबैले आफ्नो युवावस्था पेरिसको नजिकै समान फ्रान्सेली उपनगरहरूमा हुर्के।
जीन-फिलिप मटेटा प्रारम्भिक जीवन - शिक्षा र सकर बीचको संघर्ष:
आफ्नो बुवाको लागि, खेलमा आफ्नो नाम बनाउन असफल भएकोले उसलाई फुटबल एक अशुभ र निषेधित खेलको रूपमा हेर्न बाध्य पार्‍यो। दुःखको कुरा, यो विश्वास परिवारका सदस्यहरूमा बाध्य भयो। प्रारम्भमा, कट्टर बुबाले आफ्नो छोरा जीन फिलिपले कुनै फुटबल वा फुटबलको लागि आफ्नो शिक्षामा सम्झौता नगर्न जोड दिए। त्यसका बारे बोल्दै स्ट्राइकरले एक पटक फ्रान्स-फुटबल भने।
“जब म सानो थिएँ, मेरो बुबाले मलाई फुटबलको बलले छुनु पनि चाहनुहुन्न थियो। म जहिले पनि एक पेशेवर फुटबलर बन्न चाहन्थें, र स्कूल मेरो कुरा होइन। ”
तपाईंलाई थाँहा थियो?… जीन-फिलिप मातेटाका आमा बुबा दुबै बीच, यो उहाँकी आमा हुनुहुन्थ्यो जो फरक दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ। उनी आफ्नो छोराको परिवारको फुटबल सपनाहरु बाँच्नको इच्छामा विश्वास गर्छिन्। धन्यबाद, अन्ततः शिक्षा छोड्ने अवसर आयो।
फुटबल शिक्षामा कसरी विजयी भयो:
मतेटाको बाल्यकालका वर्षहरूले अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण दिनमा सकारात्मक मोड लियो। यो त्यो दिन हो जतिखेर उसले आफ्नो बुवाको अभिलाषाको बिरूद्ध लडाई जित्यो, जसले आफ्नो गन्तव्यबाट जबरजस्ती गर्‍यो। कथाको खाता दिँदै, फुटबलरले एकपटक भने फ्रान्स-फुटबल। उसको शब्दहरुमा:
“एक दिन मेरा साथीहरू फुटबलमा जाँदै थिए, र मैले उनीहरूसँगै जाने निर्णय गरें। खेल्दै गर्दा, मैले धेरै चिढ्याएँ। त्यसपछि टीमको कोच आए र मलाई भने ...
'तपाईंले आएर दर्ता गर्नुपर्नेछ!' मैले जवाफ दिए कि बुबाले यो चाहानु हुन्न। मैले उसलाई मेरी आमाको नम्बर दिएँ। उसले बोलायो, ​​मेरा सम्भावित आमाबाबुलाई बताएँ। चमत्कारी ढंगमा, मेरो बुबाले अन्ततः स्वीकार गर्नुभयो। ”
उक्त जवानले आफ्नो फुटबल खेल यात्रा छिमेक क्लब ओलम्पिक डे सेभ्रानसँग शुरू गरे। त्यसपछि उनी सेभरण एफसीमा सरे, जुन आफ्नो परिवारको घरबाट youth 33.3..XNUMX किलोमिटर टाढा रहेको छ र युवा अनुभव प्राप्त गर्न।
जीन-फिलिप मतेटा बायोग्राफी - फेम कहानी कहानी।
एक पारिवारिक जीनको उपस्थिति, जसले एक मतेटालाई विशालको रूपमा बढायो, उसको बाल्यकालदेखि नै उसलाई मनपर्‍यो। उसको उचाईको कारण, जवान केटा सधैं पुरानो विपक्षीहरूको बिरूद्ध खेल्न थाल्थ्यो।
चाँडै, उसको बुबाले उनलाई कसरी जिम्मेवारी लिने र दबाबको प्रबन्ध गर्ने भन्ने सिकाउनुभयो। यद्यपि ती बढि प्रख्यात खेलाडीहरूले उनलाई भाँच्न प्रयास गरे पनि मतेटाले गोल गरेर प्रतिरोध गरे र उनी कहिल्यै डराएनन्।
उसको बिरूद्धमा भएका सबै समस्याहरूको खण्डन गर्दै, मतेता फ्रान्सेली शौकिया फुटबलमा धेरै सम्मान प्राप्त गरेको छ भनेर चिनिने एकेडेमी (JA Drancy) को लागी प्रोजेक्ट भयो। त्यहाँ प्रभाव पाए पछि, जवानले एक हाई डिभिजन क्लब (LB Chteauroux) सँग एक युवा सम्झौता स्वीकार गरे।
उनका आफ्नै आमाबुबा (विशेष रूपमा उनका बुवा) र परिवारका सदस्यहरूको खुशीको कुनै सीमा थिएन जब उनीहरू आफ्नै युवा फुटबल (सन् २०१ 2016) लाई सम्मानका साथ स्नातक गरे। सफलता त्यहाँ रोकिएन। किशोरीले एकै सीजनमा २० गोल गरेर एक सहज वरिष्ठ क्यारियर यात्रा शुरू गर्‍यो।
जीन-फिलिप मतेटा ख्याति जीवनी कथा को लागी:
उनका गोलहरू देखेर फ्रेन्च फुटबलका दिग्गजहरू (ल्योन) लोभ्याए र यसबाट ती युवालाई हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरे। फ्रान्सेली क्लबमा हुँदा, म्याटेले आफ्नो सहज चाललाई निरन्तरता दिए किनकि उनले लियोन र ले हभ्रे (anotherण मार्फत) दुबै २२ वरिष्ठ क्यारियर गोल गरेका थिए।
जून २०१ in मा fromणबाट फर्कदै, उदाउँदो ताराले आफ्नो क्यारियरको सब भन्दा महत्वपूर्ण निर्णय गरे - विदेश जाँदै। जबकि को प्रस्थान Lacazette लियोन बाट मद्दत गर्न सक्छ। यद्यपि, को आगमन मारियानो डाजा, को उपस्थिति मेम्फिस डेप्ले र निबिल फेक स्थानहरूमा आक्रमणको लागि बढी प्रतिस्पर्धाको मतलब।
जीन-फिलिप मटेटाको जीवनी प्रस्तुत गर्दा, गोल विजार्डले बुन्डेस्लिगा क्लब मेन्ज ० with मा मिठो जीवनको आनन्द लिइरहेको छ। २०१ 05 को मध्यमा आइपुगेदेखि यो फुटबलर (अघिल्लो घुँडाको शल्यक्रियाको बावजुद) उसको नाममा रहिरहे क्लबको सब भन्दा महँगो हस्ताक्षर।
जस्तै जोनाथन डेविड, मटेटासँग उसको युवा उमेरको लागि धेरै गोलहरू छन्। अझ चाखलाग्दो कुरा के छ भने, उनले कसरी बचाव गर्ने तरिका प्रशंसकहरूलाई लाग्छ कि ऊ अर्को हो Romelu Lukaku बनाउने क्रममा।
जस्तै Romelu Lukaku, उहाँ ठूलो र कडा छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, एक उत्कृष्ट गोल मेसिन- ट्रान्स Mkt
निस्सन्देह, फिफा प्रेमीहरू र ठूला फुटबल प्रशंसकहरू अर्को शक्ति अगाडि विश्व-स्तरीय प्रतिभामा फस्दै गरेको देख्ने कगारमा छन्। जीन-फिलिप मतेटा, निस्सन्देह, स्ट्राइकरहरूको फ्रान्सेली अन्तहीन उत्पादन लाइन बीचमा हेर्ने एक मानिस हुन्। जब हामी तपाईलाई उसको केहि लक्ष्यहरु प्रस्तुत गर्दछौं, बाँकी, तिनीहरूले भन्छन्, अब इतिहास हो.
जीन-फिलिप मटेटा प्रेम जीवन - प्रेमिका, पत्नी बच्चाहरू?
जर्मनीमा ठूलो जीवन बिताउँदा, अग्लो foot फिट २ इन्च स्ट्राइकरले एक पटक आफ्नी प्रेमिकालाई सघाउन आफ्नो बाबुआमाको सहमति लिएका थिए। यसको कारण यो थियो कि २२-बर्षे उमेरलाई लाग्यो कि उनी परिपक्व छ र परिवार शुरू गर्नु आवश्यक छ। श्रीमती र बच्चाहरू पाउनु प्राथमिकतामा परिणत भयो।
COVID-19 महामारीको ठीक पहिले, प्रेमी केटाले आफ्नो प्रेमिकासँग सगाई गरे। तल चित्रित, जीन-फिलिप मतेटाकी प्रेमिका एक निःस्वार्थ व्यक्ति हुन् जसले उनको व्यक्तिको भावनात्मक समर्थन प्रदान गर्ने बाहेक अरू केही गर्दैनन् तपाईले यसको आफ्नै जीवनलाई समात्नु हो।
जीन-फिलिप मटेटाको गर्लफ्रेंड र हुनको लागि भेट्नुहोस्। - इन्स्टाग्राम
उनीहरू कसरी जाँदैछन् भन्ने कुराको आधारमा निर्णय गर्दै यो विवाह अर्को औपचारिक चरण हुनसक्दछ। अझ, यो केवल समयको कुरा हो उनीहरू एक सुन्दर बच्चा (हरू) को आमा बुबा बन्नु अघि।
जीन-फिलिप मतेटाको व्यक्तिगत जीवन:
अघिल्लो सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई मटेटाको बाल्यकाल कहानी, जीवनी, र सम्बन्ध जीवनको बारेमा धेरै सामग्री संग बमबारी। अब यहाँ एक खण्ड आउँछ जुन तपाईंलाई प्रश्न सोध्ने बनाउँदछ:
मटेटा को हो?… .. पिच बाहिर उसको व्यक्तित्व के हो?…
फुटबलरहरू चिन्न खोज्दै व्यक्तिगत Life -IG
जिज्ञासु पाठकहरूका लागि, माथिका प्रश्नहरूको उत्तरहरू प्राप्त गर्न र माथिको फोटो हेरेमा तपाईको म्याटेटाको व्यक्तिगत जीवनको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न तपाईलाई सहयोग हुन्छ। पहिलो, उहाँ एक ठूलो कुकुर प्रेमी हुनुहुन्छ।
दोस्रो, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको बारेमा, म्याटेटा एक अन्तर्मुखी र बहिर्ग्य प्रवृत्तिहरूको साथ हुनुहुन्छ। कहिलेकाँही, एक्लै समय खर्च गरेर रिचार्ज गर्न थाल्छ। अन्य समय, आक्रमणकर्ता धेरै जीवन्त हुन सक्छ। सारांशमा, मतेटाको एक एम्बिभर्ट व्यक्तित्व छ। टर्मको अर्थ कसैले अन्तर्मुखी र बहिर्गन गुणहरूको साथ गर्दछ।
जीन-फिलिप मतेटा जीवन शैली:
अग्रेषित पावरले weekly १ ,19,000, ००० को साप्ताहिक ज्याला र salary 989,900 XNUMX, XNUMX ०० को वार्षिक तलब पाउँछ। यदि तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ कि उसले कसरी आफ्नो पैसा खर्च गर्दछ, तब हामीले तपाईंलाई कभर गर्यौं।
त्यहाँ एउटा भनाइ छ 'यदि तपाईं आफूले बनाएको भन्दा बढी खर्च गर्नुभयो भने तपाईं सधैं गरीब हुनुहुनेछ।' हाम्रो आफ्नै मेटेटा एक नम्र र साहसी जीवनशैली बाँचिरहेका छन्। आफूलाई रमाइलो गर्नको लागि उसले टेनेरिफमा स्पेनी समुद्री किनारको जीवनलाई रुचाउने छ जहाँ उहाँ डल्फिनको साथ शीतल हुनुहुन्छ, केक खाउनुहुनेछ र प्रकृतिको आनन्द लिनुहुनेछ।
फुटबलरको व्यक्तिगत जीवन जान्ने
जीन-फिलिप मतेटा कार:
Peharbs, तपाईंलाई कहिले थाहा छैन, स्ट्राइकरले आफ्नो सम्पत्तीको एक पर्याप्त हिस्सा आफ्नो गाडीको आवश्यकताहरू पूरा गर्न बजेट गर्दछ। तल अवलोकन गरिए अनुसार, मतेटा आफ्नो विलासी कार फ्यानमा देखाउन लजालु छैनन्।
जीन-फिलिप मतेटा कार- उहाँ ठूला र वास्तवमै ठूला कारहरू- पिपुकीको प्रशंसक हुनुहुन्छ
अटोमोबाइलबाट टाढा सर्दै, अग्लो जीनले पनि शर्टलेस ढंगले आफ्नो दुई चक्रे साहसिक बाइकको आनन्द लिन मन पराउँछन्। कुनै श doubt्का बिना, उसको व्यक्तिगत जीवन र जीवनशैलीको दुई पक्ष छन्।
स्ट्राइकरले आफ्ना पैसाहरू साना बाइक- आईजी किन्न मन पराउछ
जीन-फिलिप Mateta पारिवारिक जीवन:
उसको बाल्यकालदेखि नै मटेटाको संसारको लागि सबैभन्दा आवश्यक कुरा भनेको परिवारका सदस्यहरूको लागि प्रेम हो। तल अवलोकन गरिए अनुसार, जन्मदिनका क्षणहरू भन्दा बढि केहि राम्रो छैन जहाँ उनीहरू परिवारको रोटी खाने नोकर मनाउँछन्।
जन्मदिनका क्षणहरू परिवारका लागि खुशीका क्षणहरू हुन् - आईजी
जीन-फिलिप मटेटाका अभिभावकहरूको बारेमा:
एक महान छोरा हुर्काउनु भएकोमा सबै धन्यवाद, फ्रेन्च फुटबलरको भाग्यशाली आमा र बुबा दुबै क्लेमार्टको फ्रान्सेली कालो समुदायमा सम्मानित छन्। माथिको फोटोमा अवलोकन गरिए अनुसार, यो देखिन्छ कि मटेटाका आमा बुबाले जनताबाट आफूलाई छायाँ दिन सचेत प्रयास गरेका छन्।
जीन-फिलिप मटेटाका भाई बहिनीहरूको बारेमा:
जहाँसम्म हामी भन्न सक्छौं, यस फुटबलरको एक भाइ र बहिनी छ जसलाई उनी धेरै मन पराउँछन्। जीन-फिलिपले उनका भाइबहिनीलाई हेरचाह गर्न समर्पण गरे जुन उनले पिचमा राखेका प्रतिबद्धतासँग मिल्दोजुल्दो छ। एक परिवार उन्मुख व्यक्ति को रूप मा, Mateta निश्चित गरे कि उनकी बहिनी एक फुटबल एजेन्ट कोर्स लिन्छ ताकि उनी उसलाई एजेन्ट को रूप मा प्रतिनिधित्व गर्दछ।
जीन-फिलिप मतेटाकी बहिनीलाई भेट्नुहोस् जसले उहाँलाई उनको एजेन्टको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ। Instagram इन्स्टाग्राम
जीन-फिलिप मतेटाका आफन्तहरू:
अझैसम्म आफ्नो बाटोमा काम गर्दा, फुटबलरसँग उसको बुबाआमा र बहिनीले आफ्नो समर्थन उनीहरुको लागि फ्याँकिएन। मतेटाको आफन्त पनि थियो, जो आफ्नो प्यारी बुआबाहेक अरू कोही छैन। नमस्कार तपाई पढ्दै, के तपाई उसलाई तलको फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ?
जीन-फिलिप मटेटाको आमा, बहिनी र काकीको लागि एक राम्रो फोटो उनीहरूको लागि उनी खुशी छन् - इन्स्टाग्राम
जीन-फिलिप मतेटा तथ्यहरू:
हाम्रो बाल्यकाल कहानी र जीवनी तथ्या up्कहरूलाई मिलाएर, हामी यस सेक्सनमा प्रस्तुत गर्दछौं, तथ्यहरू जुन तपाईंले कहिल्यै जान्नुहुन्न जीन-फिलिप मतेटाको बारेमा अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो।
तथ्य # १- ऊसँग फुटबल एजेन्टहरू मनपर्दैन।
एक फुटबलर को रूप मा आफ्नो शुरुआती दिन देखि, Mateta सँधै उनीहरु के विचार को रोकथाम को लागी एक अधिवक्ता छबर्बादी' स्ट्राइकर विश्वास गर्छन् फुटबल एजेन्टले केहि पनि धेरै पैसा कमाउँदैनन्। फ्रान्सेली मिडियासँग कुरा गर्दा उनले एक पटक भने किन उनी एजेन्ट लिने पक्षमा छैनन्। उसको शब्दमा;
"एजेन्टहरु मलाई धेरै कल गर्छन्। मसँग एक वकिल छ र त्यो मेरो लागि पर्याप्त छ। म एजेन्ट राख्ने पक्षमा छैन। एक पटकको कुरा हो, म मेरो क्यारियरमा थिए। अब चासो छैन।
तिनीहरूले मलाई पहिले नै थाहा भएका कुराहरु भन्छन्। ”
अगाडि भनिएझैं, जीन फिलिप मातेटाको परिवारका सदस्यहरू (उसको बच्चा बहिनी) उसको एजेन्टको कर्तव्यका लागि आरक्षित भइरहेको छ। सत्य यो हो कि उसले वास्तवमै यसको लागि अध्ययन गर्‍यो।
तथ्य # 2- धर्म:
यदि तपाईले विश्वास गर्न बाँकी नै छ भने, जीन फिलिप मटेटाका आमा बुबाले उनलाई मुसलमानको रूपमा हुर्काएको देखिन्छ। तपाईंको सूचनाको लागि, हामीसँग यसको फोटो प्रूफ छ। युएईको अबु धाबीस्थित शेख जायद ग्रान्ड मस्जिदमा आफ्नो प्रार्थना पूरा गरेपछि फुटबलरलाई चित्रण गरिएको छ।
जीन-फिलिप मतेटा धर्म- अगाडि भर्खर युएईको अबु धाबीस्थित हेख जायद ग्रान्ड मस्जिदबाट फर्कियो। ऊ मुसलमान आईजी हुन सक्छ
मटेटा अनटोल्ड तथ्यहरूमा अधिक:
तथ्य # 3- उहाँको फुटबल आइडल:
बस स्विडेनी फुटबलर जस्तै अलेक्जेंडर इस्क, म्याटेला तिनीहरूसँग सम्बन्धित छ जो देख्दैनन् Messi or सी रोनाल्डो तिनीहरूको मूर्तिहरूको रूपमा। उसको अग्लो फ्रेमको कारण, उनी विश्वास गर्दछन् कि ऊ मात्र एउटा मूर्ति हुन सक्छ - अरु बाहेक अरू केही छैन Zlatan Ibrahimovic। उसको शब्दमा;
"म अग्लो भएको हुनाले र म छिटो दौडने एक अग्लो स्ट्राइकरको खोजीमा थिएँ, जसले टेक्निकल इशारा र ड्रिबल्स बनाउँदछ। मलाई Zlatan मा के मनपर्‍यो? ... उनको स्कोरिंग पक्ष जसले उनलाई इतिहासको सर्वश्रेष्ठ स्कोरर बनाउँछ। यसमा कुनै बहस छैन। ”
तथ्य # 4- वेतन ब्रेकडाउन:
जून २०१ of सम्म, मतेटाले एफएसभी मेन्ज ० with सँग सम्झौतामा छाप लगाई। यो फलदायी सम्झौता एक हो जसले उसलाई प्रति हप्ता १ ,2018, ००० वेतन र an 05 19,000, 989,900 ०० को वार्षिक तलब कमायो। बिट्समा उसको आम्दानी तोड्दै हामीसँग निम्न तथ्या .्कहरू छन्।
पाउन्ड स्टर्लिंग (£) मा आय
अमेरिकी डलरमा आय ($)
प्रति वर्ष € 989,900 £ 863,534 $ 1,076,654
प्रति महिना € 82,492 £ 71,961 $ 89,721
प्रति हप्ता € 19,000 £ 16,735 $ 21,883
प्रति दिन € 2,714 £ 2,391 $ 3,126
प्रति घण्टा € 113 £ 99.6 $ 130
प्रति मिनेट € 1.88 £ 1.66 $ 2.17
प्रति सेकेन्ड € 0.03 £ 0.02 $ 0.03
माथिको वेतन तथ्या .्कमा आधारित, यो के हो जीन-फिलिप मतेटा तपाईं पछि कमाएको छ यो पृष्ठ हेर्न शुरू भयो।
Peharbs, तपाइँ कहिल्यै थाहा छैन। जर्मनीमा औसत मानिस जसले एक महिनामा १,1,610१० डलर कमाउँछ उसले कम्तिमा 4.2..२ वर्ष काम गर्नुपर्नेछ € ,२,, 82,492२ कमाउन, जुन स्ट्राइकरले १ महिनामा बनाएको रकम हो।
अहिले सम्म धन्यबाद, जीन फिलिपमा हाम्रो कथा पढ्दै। मटेटामा यो सामग्री राख्ने क्रममा बचपनको कथासहित, उनको जीवनी तथ्यहरू, हाम्रा सम्पादकहरू शुद्धता र निष्पक्षताको लागि हेर्दै थिए।
यदि मामलामा, तपाईले जीन फिलिपमा यस लेखमा ठिकै नदेखिने कुरा देख्नुभयो भने, कृपया तपाइँको टिप्पणी गर्ने प्रयास गर्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
अन्तमा, हामीले हाम्रो जीन-फिलिप मटेटा विकी तयार गरेका छौं, जसले तपाईंलाई स्ट्राइकरको बारेमा छिटो र अझ विस्तृत जानकारी लिन मद्दत गर्दछ।
पुरा नाम: जीन-फिलिप मतेटा
उपनाम: नयाँ ट्रेजेगुएट
जन्मे: 28 जून 1997 (उमेर 22)
पारिवारिक मूल: कo्गो र फ्रान्स
पिता: श्री मतेटा (पूर्व कंगोलिज फुटबलर)
आमा: श्रीमती मटेटा
भाई बहिनीहरू एक बहिनी (उसको एजेन्ट)
उचाइ: 1.92 मीटर (6 फुट4मा)
वजन: 84 किलो
फुटबल आइडल: Zlatan Ibrahimovic
परिमार्जित मिति: मे १,, २०१ 31